Oovimba be-XAUUSD-Funda ukurhweba
Igolide (XAUUSD) Ibonisa ukuzinza kwiXabiso, iqala kwakhona i-Uptrend
Igolide (XAUUSD) iqhubekile ikwintshukumo ebopheleleke kuluhlu. Ukususela ngoMeyi, ixabiso leGolide liye laguquguquka phakathi kwamanqanaba e-$ 1,725 ​​kunye ne-1,820 yeedola. Ukuhamba emacaleni kwenze ixabiso leGolide ukuba lizinzile. Inkxaso ye-$ 1,720 ihlolwe kabini njengoko iibhere zihluleka ukuphula umgangatho wokuxhasa. Ngokufanayo, iinkunzi zenkomo ziye zaphinda zayiphinda i-1,820 yeedola kodwa zagxothwa. Ikhefu elingaphezu kwe-$ 1,820 ephezulu iya kukhupha iGolide ukuya phezulu kwi-1,900 yeedola.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni. Igolide ikwinqanaba le-54 yexesha le-Relative Strength Index 14. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka kweGolide.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso leGolide likwinyathelo elinyukayo njengoko ixabiso lophuka ngaphezu kwemiyinge ehambayo. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokukhatywa kwindawo yokumelana ne-$ 1,800. Okwangoku, ngoNovemba 4 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 1,806.21.
I-XAUUSD-2 Itshathi yeYure
Igolide ingaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Ixabiso legolide likummandla othengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Imarike ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Ixabiso leGold's (XAUUSD) liqalisa kwakhona ukunyuka phezulu. Igolide iyenyuka ukuze ivavanye kwakhona inqanaba lokumelana ne-$1,800.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha. Thenga iiTokens